Ana de Armas waxay u taagan tahay GQ Mareykan ah | Ragga Stylish
Ana de Armas waxay u muuqataa mid kacsi badan GQ-ga Mareykanka. Ka dib markii ay horumartay inta badan shaqadeeda Spain, Cuba-ka waxay u boodday Hollywood, halkaas oo ay ku shaqeyneyso laakiin si aad u wanaagsan.
Manhajkeeda (wuu balaadhnaa inkasta oo ay dhalinyaro ahayd) iyo quruxdeeda aadka u weyn waxay albaabada u fureen meekha shineemo iyada, inkasta oo si ay uga gudubto ay ahayd inay barato Ingiriisiga, oo ah luuqad ay barteen laba sano ka hor oo keliya, sida iyada lafteedu ay ku qiratay wareysi.
Fadhiga sawirka ay doorteen dharka hoosta dumarku ka gashadaan iyo dharka dabbaasha taasi waxay xoojineysaa muuqaalka mudnaanta leh ee 28-sano jirkaan u dhashay Cuba, kaasoo caan ka noqday Isbaanishka taxanaha 'El Internado', in kasta oo indhaheeda waaweyn ee cagaaran durba la dhacsan yihiin kulankeedii ugu horreeyay 'Una rosa de Francia' (2006).
Midab shidan oo aan lakala sooci karin eeygeeda Elvis, saaxiibtinimo Maltese Bichon, Aktarada ayaa ku caanbaxday waxa laga yaabo inay tahay sawirkeedii ugu fiicnaa ee taariikhda.
Wuxuu hadda duubayaa qeybta labaad ee 'Blade Runner', Meel aan la garanayn doorka ay ka ciyaari doonto, in kasta oo aynaan layaabi doonin haddii ay noqon lahayd mid celcelis ahaan jirkeeda oo dhammaystiran awgeed.
Hadda oo uu isagu naftiisa u sameeyay, waa inuu u dagaallamo sidii uu u caddayn lahaa wax Spain ka jira oo aannu hore u ogaanay: inuu noqon karo wax ka badan gabadha quruxda badan ee filimka ku jirta. GQ wuxuu ku kalsoon yahay inuu sidaas samayn doono, innaguna sidaas oo kale ayaan annaguna nahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Ana de Armas, oo kacsi leh isla markaana ka dhex iftiimaysa GQ-da Mareykanka